राष्ट्रियसभा समितिका सभापतिमा थापा, गुरुङ र बिंडारी निर्विरोध
२०७५ भदौ १३ बुधबार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा मातहतका चारमध्ये तीन विषयगत समितिका सभापतिको निर्विरोध चयन भएको छ । विषयगत समितिमा बुधबार बसेको बैठकमा सभापतिहरुको निर्विरोध चयन भएको हो । ... बाँकी अंश»
संसदीय समितिका सभापतिमा क-कसले दिए उम्मेदवारी ?
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका चारमध्ये तीन विषयगत समितिका सभापति पदका लागि मंगलबार उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भएको छ । ... बाँकी अंश»
संसदमा प्रधानमन्त्रीको १ घण्टा ४ मिनेट लामो भाषण, के भने ?
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता गरेको र त्यो प्रतिबद्धता मात्र नभई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत भएको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको तयारी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको संसदमा संवोधन (भिडियो)
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा सम्बोधन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन तयारी लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीले संसदमा संवोधन गर्दै, जनाऊ बिमस्टेकको अल्झन शान्ति सुरक्षाको
२०७५ भदौ १२ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन तयारी लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । ... बाँकी अंश»
१८ विधेयक संसदीय समितिमा
२०७५ भदौ ११ सोमबार, काठमाडौं। नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितसहित १८ महत्वपूर्ण विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ। ... बाँकी अंश»
सांसद बोलिरहदा रोष्ट्रममा अमर्यादित ओहोरदोहर भएपछि सभामुख 'फायर'
२०७५ भदौ १० आइतबार, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरुलाई मर्यादित भई बैठकमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले बोलिरहँदा अमर्यादित ढङ्गबाट रोष्ट्रम अगाडिको भागबाट ओहोरदोहोर नगर्न सभामुखले निर्देशन दिए । ... बाँकी अंश»
निर्मला हत्याको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग
२०७५ भदौ १० आइतबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ ७ बिहिबार, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयका नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ ७ बिहिबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले कञ्चनपुरमा भएको बलात्कारको घटना, स्थानीय तहमा भएको भनिएको करवृद्धिलगायत मुलुकका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ... बाँकी अंश»
रसुवागढी नाका तत्काल सञ्चालन गर्न सांसद आचार्यको माग
२०७५ भदौ ७ बिहिबार, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवागढी नाका तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ... बाँकी अंश»
नागरिकतामा १०० बढी संशोधन : विदेशबाट ल्याइने बुहारी र विदेशी ज्वाईँलाई एउटै व्यवहारको माग
२०७५ भदौ ६ बुधबार, काठमाडौं। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा सय बढी संशोधन परेका छन् । त्यसमा पनि सबै भन्दा बढी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तीमा संशोधन परेका बताईएको छ । विधेयकमाथि १ सय २ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय पनि सकिएको छ । जसमा ६९ जना सांसदले २३ वटा दफा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ ४ सोमबार, काठमाडौँ । देशव्यापी रुपमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले ध्यान नदिएको भनी सांसदले गुनासो गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
विकासको रोमाञ्चक यात्रा विनाशमा गएर नटुङ्गियोस् : गगन थापा
२०७५ भदौ ४ सोमबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद गगन थापाले सरकारलाई विकासको रोमाञ्चक यात्रा विनाशमा गएर नटुङ्गियोस् भन्ने सुझाब दिएका छन् । सांसद थापाले विकासको रोमाञ्चक यात्रा विनाशमा गएर नटुङ्गियोस् भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
प्रतिनिधिसभामा सांसदको आक्रोश, करले ढाँड भाँच्यो
२०७५ भदौ ४ सोमबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शुन्य समयमा सांसद उमेश श्रेष्ठले देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा कर वृद्धि गरेर जनताको ढाँड सेकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
समितिका सभापतिको निर्वाचन १२ दिन पर धकेलियो
२०७५ भदौ १ शुक्रबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा मातहतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन १२ दिन पर धकेलिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले यही भदौ ५ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति विशेष कारण भदौ १७ गते आइतबारका लागि सारिएको जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
गृहमन्त्री वादललाई कांग्रेस सांसदको प्रश्न–‘ठूला माछा कुन नदीमा पौडी खेलिरहेका छन् ?
२०७५ श्रावण ३० बुधबार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मीना सुब्बाले सुन तस्करी काण्डमा साना माछा पक्राउ गरेको र ठूला माछाले उन्मुक्ति पाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ श्रावण ३० बुधबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७५लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । ... बाँकी अंश»
दश सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण
२०७५ श्रावण ३० बुधबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ... बाँकी अंश»
सांसदले ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने
२०७५ श्रावण २९ मंगलबार, काठमाडौँ । सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । ... बाँकी अंश»